Fandravana roba: andro voalohany! | Hevitra MPANOHARIANA
Fandravana roba: andro voalohany!
2009-03-04 @ 22:19 in Politika
Androany alarobia 04 marsa no andro voalohany nanakanana ny fitokonana hofaranana hatreo eny amin'ny kianjan'ny 13 mey teto Antananarivo ary nahombiazana tamin'izany. Tsy midika velively izany fa izay no izy satria azo veroka ny mbola hitohizan'ny fifandonana rahampitso alakamisy 5 marsa, tsy hisy hanaiky ho resy vetivety fotsiny amin'izao manko taorian'izay fotoana maharitraritra izay. Efa ela ihany ny niandrasana ity fanapahan-kevitry ny Emmo nat ity, fa androany izany vao natao. Tranga vitsivitsy no azo heverina ho nanapahan-kevitra ho amin'izany.
Voalohany, fanapahan-kevitra iray tiako ny tsy faneken'ny GEM (groupement des Entreprises de Madagascar) ny hanaovan'ny mpiasa ao aminy fitokonana (politika) tsy manara-dalàna ka raha misy ny olona ivelan'ny orinasa mitady haka mpiasa (araka ny efa fanentanan'ny mpitarika ny TGV teny an-kianja ny talata) dia adidy ny miantso ny Emmo nat hanaparitaka ireo mitady hiditra an-keriny any anaty orinasa ireo. Efa taratry ny tsy faneken'ny mpandraharaha ny fanelingelenana sy ny famotehana ny toe-karena ataon'ny mpitolona ihany koa izany fanapahan-kevitra izany. Raha misy avy amin'ny mpiasa anatiny kosa indray moa mitarika ny olona hivoaka any ivelany dia raisina ho tsy fahatongavana tsy ara-dalana sy fandaozana asa tsy ara-dalàna izany rehetra izany. Tokony ho tolona sendikaly rahateo no ataon'ny mpiasa fa tsy tolona politika velively. Na hiteny sahala amin'inona aza manko ny mpitarika ny tolona ankehitriny tsy resy lahatra intsony ny mpandraharaha fa ho tombotsoan'ny orinasa malagasy sy eto Madagasikara tokoa ny anton'izao tolona izao, nangataka fanampiana tamin'ny oriansa rahateo moa ny mpitarika ny fitokonana hanohizana ny tolona.
Manaraka izany, na dia tsy misy mipika aza ny resaka nataon'ny masoivoho vahiny (tandrefana tsy nahitako kosa ny solontenan'i Vatican) dia efa tarataratra sahady fa fampitandremana no natao tamin'ny mpitarika ny tolona hampitsahatra ny fialana eo an-kianja ka hisintona olona any amin'ny minisitera sy sekoly ary orinasa afakaba any. Efa fandikana ankitsirano ny fahalalahan'ny hafa tsy hitokona manko ny fitadiavana hisintona olona any amin'ny misy azy any. Tsapan'ny mpitondra fanjakana ihany koa angamba ny mety ho ambadiky ny fihaonana tamin'ny mpitarika ny tolona sy ireo masoivohon'ny firenena vaventy ny talata tolakandro ity. Eo ihany koa ny fandalovan'ny solontenan'ny Firaisambe Afrikana teto Madagasikara ka iheverako avy hatrany fa na nahazo fampitandremana amin'ny tsi-fihetsehany Ravalomanana na nahazo fanekena ny amin'ny tokony handravana amin'izay ny tolona.
Ny mahavariana ao anatin'izany rehetra izany dia ny mbola nisian'ny fihaonan'ny solontenan'ny roa tonta mpitondra fanjakana sy mpitolona eny Ambohimanambola ao amin'ny Le Hintsy hatrany, efa tsy hitako intsony manko izay mbola mety ho anton'ny fihaonana afa-tsy ny taratasim-paneken'ny mpitolona fa resy izy ka mba omena fanalefahan-tsazy na fahafahana manomana ny entana hivoahana an'i Madagasikara sy tsy hanohintohina ny fandriampahalemana intsony angaha, na fitadiavana izay tena atidohan'ireto jiolahim-boto miseho azy ho mafy be ireto ka mitady ny hotifirina amin'ny bala tena izy mihitsy (heveriny manko fa tsy manana alalana hitifitra azy ireo mihitsy ny mpitandro ny filaminana ka fantany fa tsy haninona amin'izay ataony izy). Nefa nahavariana ihany ny halavan'ny fihaonana satria fotoana maromaro mihitsy no nanaovana ny dinika na dia efa nambara sahady aza fa tsy hisy ny fanambarana ho an'ny mpanao gazety amin'ity andron'ny alarobia ity. Ny hany fantatra hoe nifanatrika tamin'ity fihaonana ity manko dia ny solontena telon'ny mpitondra ara-dalàna (Minisitra Razafimahefa Ivohasina, Rakotondramboa Noel ary ny mpitarika ny delegasiona ny filohan'ny antenimieram-pirenena Sylla Jacques), ireo filoha efatry ny fiangonana ao amin'ny FFKM miaraka amin'ny solontenan'ny Firenena Mikambana ary ny hany fantatra ho solontenan'ny mpitolona dia ny Jeneraly Ramakavelo Désiré Philippe. Somary mahavariana ahy ihany dia ny hoe mahatapa-kevitra ho avy amin'ny mpitokona tokoa ve ny solontenan'ny TGV(?) na dia milaza ho tsy hifampiraharaha sy hifampiresaka amin'ny mpitondra intsony aza ny mpitarika ny TGV?
Izay no ela fa azo fintinina ho fiarahabana ny Emmo nat no nataon'ny maro tamin'ity asam-pandravana tolona ity. Dia tena nirarak'ompana tokoa anie izany fankasitrahana ny nataon'ny Emmo nat izany e! Fony izaho teny Ambonin'ny tonelina Ambanidia aza (Ambohijatovo ambony tokony ho tamin'ny 11 ora atoandro teo) dia nisy vitsivitsy nahasahy nitehaka isaky ny misy baomba mandatsa-dranomaso re, fa na izany na tsy izany tsy izay teny rehetra dia nankasitraka ny fandravana ny tolona avokoa (na maro an'isa kokoa aza izany teny) fa nisy ny tezitra niteny hoe fa tsy ho lany angaha ny balan'ialahy? Ilay efa nahavoa ihany tamin'ny 7 febroary 2009 iny ka nisian'ny tifitra variraraka fanindroany. Ny manahirana amin'ny resaky ny mpihaino dia misy hatrany ny mihoam-pefy toy ny "fangatahana tso-drano" handoro ny tranon'ny lehiben'ny TGV ohatra. Tsy tokony hanao izany loatra ny mpanohana ny ara-dalàna fa fandikan-dalàna izany na ho inona hatezerana na ho inona.
Na izany na tsy izany dia nanao zavatra tsy nety ihany koa ny nataon'ny mpanao gazety tao amin'ny TV Plus ohatra izay toy ny mampibaribary fa i Naina Andriatsitohaina (tompon'ny Les Nouvelles sy ny Taratra) no nibaiko ny mpikambana tao amin'ny GEM tamin'izay zavatra efa nosoratako tery ambony, ny fahatsapana tao anatiko tao dia tsy tiana aseho na iniana ampanginina mihitsy fa nisy fanapahan-kevitry ny komity mpanatanteraka tao nahatonga ny taratasy naely tamin'ny mpikambana fa toa te-hanondro na hibaiko ny mpitolona handoro ny Niag, ny Les nouvelles ary ny Taratra ny mpanao gazetin'ny Tv Plus rahampitso alakamisy 5 febroary. Ny an'ny Viva TV moa dia notononiny ny anaran'ny manamboninahitra nibaiko tamin'ny fifehezana ny kianjan'ny 13 mey ity toy ny hilaza amin'ny mpitolona hoe raha fantatrareo ny misy ny tranony dia amboary fa miseho azy ho mafy amin'ity tolona ity. Tiana ny manamarika amin'izao fotoana izao fa ny fantsona nisy ny mbs tv teo aloha dia efa lasa viva tanteraka nanomboka tamin'ny enina hariva teo, ary rehefa nohamariniko mihitsy aza ny isan'ny fantsona ahazoana ity Viva TV ity hatraty amin'ny faritra misy anay dia 9 ny isany ka voatsindriny ihany koa ny TV record, ny OTV moa dia voahelingelin'ny Viva TV saingy tsy niova tanteraka kosa... Nohamariniko indray ny tamin'ny Radio Fm fa eo amin'ny 100.8 Mhz ihany no ahenoako radio mada, ary izany aza manahirana ny mahazo azy. Ny mbs radio (95.4 Mhz) nahafahana nihaino radio mada teo alohaloha teo dia tsy misy na inona na inona intsony, fa ny Viva radio kosa aloha dia tsy heno intsony aty aminay... azo lazaina ho matanjaka ihany anefa ny radio fampiasako! Fa izaho aloha maniry indrindra ny hamotehana tanteraka ity tele sy radio viva ity fa be loatra ny fafy lainga ataony indrindra fa ny fandranitana isan-karazany e!
Tranga iray tsikaritry ny mpanao gazety ny nisian'ireo vazaha vitsivitsy nijorojoro nanatrika indrindra ny kianjan'ny 13 mey, mahavariana tokoa ny ijorojoroan-dry zalahy ho hitan'ny mpanao gazety eny fa izaho kosa aloha mankasitraka ny torohevitr avy amin-dry zlahy raha izay no hampilamina ity raharaha ity e! resaka tetipanorona ny azy fa tsy misy idirana fandraisana fitaovam-piadiana mihitsy tsinona. Ny tranga iray nambaran'ny gazety ihany koa dia ny fahitany fa misy ny fizaram-bola ireo mpikambana rehetra ao amin'ny Emmo nat ary ny re aza dia hoe 3 alina ariary no azon-dry zalahy... dia hoy aho hoe, any amin'ny satan-dry zalahy mihitsy ny filazana fa rehefa anatin'ny fotoana manokana tahaka ny amin'izao fotoana izao dia mandray 3 alina ariary isan'andro mihitsy ny zandary sy ny miaramila, kely dia kely tsy ampy ampahafolon'izany kosa no mba raisin'ny ao amin'ny polisim-pirenena. Manamboninahitra aloha no nandrenesako izany an!
Manaraka, tsikaritra nahavariana ahy mihitsy ny fahasahian-dry zalahy nifanandrina tamin'ny mpitandro ny filaminana ireto, efa nambarako tetsy aloha ihany izany saingy tena tsy aritro mihitsy. Tsy nanaiky ny hihemotra mihitsy ry zalahy. Nisy aza ny fotoana voatery nihemotra tonga hatreny anoloan'ny boriborintany voalohany (Soarano) ny mpitandro ny filaminana fa rehefa avy eo indray vao nanosika ireto tovolahy ireto hihemotra hatreny amin'ny tetezan'ny Behoririka hatrany. Ny zavatra hitako teny amin'ny Mascotte (Antsahabe indray) rehefa resy tosika ny andian-jatovo tamin'ny voalohany dia nifanolosolo akanjo aloha ry zalahy dia nanomboka niakatra hamonjy ny tonelina Ambanidia indray hidina ho any Ambohijatovo. Raha fariparitana moa ny faritra voatery nofehezin'ny mpitandro ny filaminana tamin'ity androany ity dia hatreny Ambohijatovo manoloana ny AFD, tonelina Ambohidahy, manerana ny pavillons Analakely, Antsahavola, Tsaralalàna manakaiky ny Anjary Hotel, petite vitesse, Soarano manontolo sy Ambodifilao manontolo ary tafiditra ho tsy azo nandehanana ny tohatoha-baton'Ambondrona raha azo nivezivezena kosa ny tohatoha-baton'Antaninarenina, Behoririka manakaiky ny Luxor na Cinema Soa taloha, Antanimena iray manontolo, ka hatreny Ankazomanga rond point amin'ny lalam-baovao.
Nisy ihany ny fikasana hametraka barazy nataon'ny mpandroba tety amin'ny 67ha avaratra atsinanana manatrika ny parking saingy toa tsy vanona mihitsy izany raha tsy efa halina ny andro, tsikaritro fa sady miteny ireo mpampirisika ny hanangana barazy no lasa ry zalahy midifidify toy ny tsy teo, ny tena anavahana ireto lohandohan'ny fitarihana ny barazy ireto (izay nizara taratasy hanohizna ny tolona ataon'ny TGV miainga isam-pokontany ny alakamisy 5 martsa 2009) dia saiky mitady tee-shirt mena midorehitra avokoa ry zalahy. Asa aloha ianareo namaba hafa raha nahatsikaritra izay na tsia fa efa andro maromaro mihitsy no nahatsapako izany (tia akanjo mena manko aho, tsoriko izany, ka tohina aho amin'ny fihetsiky ry zalahy ireto). Niteny tamin'ny olona aho hoe tsy mety ve raha mivondrona isika hanaisotra an-dry zalahy ireto (satria tokotokony ho 20 eo ho eo ny isan-dry zalahy miaraka amin'ireo somary mody mihatakataka), nefa ny valinteny reko dia hoe adalan'ny tena ireny e! Tena loza mitatao anefa ry zalahy satria manao ilay fomban'ny mpandroba e: mihazakazaka tampoka hampikoropaka ny olona dia avy eo hifaoka tampoka izay azony eny ampandalovana. Efa be ihany ny mahalala izay paika izay ka tsy taitra intsony, kanjo hita ami'izay ny havitsian-dry zalahy! saiky hanakana ny lalam-baovao ry zalahy ka rehefa hitany fa vitsy izy ireo teo. Lasa ry zalahy avy eo nihazakazaka nanaraka ny lalambaovao nankany Ankazomanga any... hita hoe vahiny an'i 67ha no tena marina.
Izay aloha no voasoratra androany alakamisy 05 martsa 2009 amin'ny 00:16 ora maraina fa indro aloha soratako ihany ny tsapako omaly saingy tsy tafavoaka moa noho ny tsy fisian'ny zotram-piseraserana telma taty aminay omaly ka tsy nahafahana nivoivoy an'aterineto ihany koa raha tsy izao alina izao.
jentilisa 05 martsa 2009
Manomboka eto kosa ny saiky navoakako omaly saingy noho ny tsy fisian'ny aterineto dia tsy nivoaka izany: Saiky tsy te-hilaza ny antony itadiavako ny handravana ny hetsika tamin'ny Asabotsy (faran'ny volana febroary) aho fa tsy takatry ny sasany mihitsy angamba ny antony, na menatra ny "hampiasa hery" eo anatrehan'ny solotenan'ny Firenena Mikambana ry zalahy. Henjana ihany koa moa ilay fitakian'ny Arsheveka nanohana an-kolaka ny hisian'ny fihetsiketsehana etsy amin'ny kianjan'ny 13 mey sy ireo toeran-kafa any amin'ny faritra any e! Ny ahy tena resaka teti-panorona mihitsy no antony: Efa fantatra ve fa volana martsa no tokony hiditra mianatra ny mpianatra eny amin'ny Anjerimanontolo dia tsy tokony hieritreritra ianao amin'ny handravana mialoha ny hahatongavan'izany volana martsa hidiran'ny mpianatra an-tsehatra izany? Tena tsy ampy mpahay ady na teti-panorona mihitsy ve manodidina ny filoha Ravalomanana amin'izany zavatra efa fantatra mialoha izany? Sa raha nilaza izany tetika izany mialoha aho dia mety ho nekena ihany ny hevitro? Inona ankehitriny ny vokany: hita ho miha-mahazo hery sy mihamahazo vahana ny mpitolona, ialako tsiny amin'ny mpanaja ny ara-dalàna izany, satria afaka mandà ny fepetra notakian'ny Arsheveka ianao fa tsy hirepirepy amin'ny fifanarahana fantatra fa tsy hitondra mankaiza. Izany fandravana ny tolona izany tsy midika velively hoe sambory ranona na sambory ranona satria tsy hahazaka izany ny fonja misy eto Madagasikara. Tsoriko anefa fa raha tsy misy ny fandraisana andraikitra goavana ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ny amin'io handravana ny fitokonana io dia miala tsiny aho fa efa mananontanona tsy azo ihodivirana ny firodanan'ity fanjakana ara-dalàna ity.
Hitan'ny olona ny fanaovana azy amin'izao fotoana izao: asiana barazy toy ny tany Goadelopy sy Martinika fotoana maromaro lasa izay ny lalana, ka na vitsy an'isa aza ry zareo dia nahabahana izay azo nosakanany rehetra! Tombon-dalana tsy misy tahaka izany, satria tsy mahay mivondrona na tsy avelan'ny fampielezam-peon'ny mpanohana an-dRavalomanana hivondrona hanohitra ny tsy rariny mihatra aminy ireo efa leo sy boboka tanteraka ny toe-draharaham-pikatsoana misy amin'izao fotoana izao. Mihevitra ve ireo ao amin'ny fitondrana fa vitan'ny mpitandro ny filaminana ny manao ny asam-pandravana ny barazy ataon-dry zalahy... Tsy voatery hanao herisetra anie ny olona amin'izany e! sa tena tsy manana mpanentana sa matahotra ny ainy ny TIM any anivon'ny fokontany any? Tsy hisy ho sahy hanohitra hoe tsy manaiky ireny barazy ireny izahay ve? Terena ry zareo mpanao barazy hoe raha toa ka misy fandrobana na fanendahana na fangalarana any amin'ny faritra tratran'ny barazy dia anjaran-dry zareo ny miandraikitra ny fisamborana ireo nihoa-pefy tamin'ny tokantranon'olona iharan'ny tsy rariny... ka rehefa tsy efan-dry zareo izany dia anjaran'ireo nanao ny barazy izany ny manolo ny zavatra very sy simba nahazo izay niharan'izany, mbola hahasahy hidongy hametraka ireny ihany ve ry zareo? Mino aho fa rehefa tena mifampizizo ny roa tonta hiala moramora ireny mpanao barazy ireny... indrindra rehefa hitany fa vitsy an'isa ry zareo. Sady ny hitako aloha hatramin'izao dia ny mpanendaka sy ny mpandroba no tena manao ny barazy amin'izao 2009 izao.
Indroa andro izay no nihorohoro hatrany izahay manakaiky ity faritr'Analakely ity. Isaky ny tapitra ny fivoriana eo amin'ny kianjan'ny 13 mey dia misy ireny olona mitangorongorona ireny no miforona ho azy ho andian-jiolahy manakan-dalàm-be, tena hita mihitsy fa lasa mitovy any amin'ireny tany Afrikana misy gidragidra ireny e! Ny hitako ny alatsinainy 2 martsa 2009 fotsiny dia nahitana fa teren-dry zalahy hamoaka ny vola any aminy ny mpanamory fiarakaretsaka mbola nitonantonana hanavatsava an-dry zalahy. Ary dia tena voaendaka tokoa izay tratrany. Nohantsian-dry zalahy amin'izay ny Emmo nat miambina ny tranombarotra lehibe saiky hovakian-dry zalahy saingy tsy tontosa moa fa tonga aloha loatra ny Emmo nat na dia nisy aza ny sakan-dalana nataon'ny mpitolona eo Analakely tsy ahafahan'ny fiara miditra. Tena mazava dia mazava aloha fa ny handrangitra ny mpitandro ny filaminana fotsiny no ataon-dry zalahy rehefa tsy nahavaky tranombarotra teo akaiky teo ry zalahy. Fa ny nampihomehy dia nisy fiara nitondra mpitandro ny filaminana hafa efa nijokojoko tao an-damosin-dry zalahy tao. Rifatra ihany ny farany avy eo satria tsy nampoizin-dry zalahy ilay fivoahana avy tao an-damosin-dry zalahy iny. Nilamindamin-dratsy ny faritra tena manakaiky anay raha mbola nandrenesana baomba mpandatsa-dranomaso sy baomba mankarenintsofina ny tao afovoan'Analakely tao.
Ny talata 3 marsa 2009 indray efa ninia ny hiditra am-piasana taratara mihitsy aho hay tena tao anatin'ny ady mangotraka no nankanesako tao am-piasana. Nisy olona nivorivory manko teo anoloan'ny vavahady ka norarafan-dry zalahy Emmo nat baomba mpandatsa-dranomaso teo... tena maina vetivety teo ny tendako sy ny lelako, ary narary ny lohako, fa masiatsiaka noho ny sakay ity setroky ny baomba e! tena rotsa-dranomaso tsy nitomany izao nataoko izao ry zareo... tratra daholo izahay rehetra e! fa na dia efa tsy hitanao intsony aza ny setroka fa mbola mahery ny asan'ilay izy e! Tena hoy aho any an-eritreritro any hoe tsy maintsy hiaina tahaka izao hatrany izany isan'andro isaky ny mirava ny kianjan'ny 13 mey e! Nefa anie na dia teo aza izany vakin-dry zalahy hatrany ny Samckowa e! Ahoana ny nanaovany azy hoy ianareo? Mody avy ry zalahy amin'ny fitenenana hoe hanala faty fa mbola misy faty ao amin'ilay trano efa rava eo anilany eo, manararaotra tamin'ilay fisiana faty mbola nofongarina avy tao amin'ny trading center natapy andro teo amin'ny kianjan'ny 13 mey e (faty efa iray volana mahery ve ry zareo?)! hay ny rindrina no naboroakan-ndry zalahy tao anatin'ny fotoana fohy. Lasa ny entana e! tsy nampoizin'ny Emmo nat iny satria haingana dia haingana koa ny fandrobana natao... Efa misy miteniteny koa moa izao ny handrobana ny orinasa misy anay, efa nisy nampirisika ihany tamin'ny alatsinainy fa soa ihany fa tsy mbola naharesy lahatra ny be sandry tamin'ny mpandroba aloha!
Asa raha misy mahamarika ianareo fa misy ireny taratasy karazana afisy mipetaka ireny amin'ny tranombarotry ny karana ao Tsaralalàna. Teny arabo ilay izy ka tsy fantatry ny Malagasy loatra izay ambaran'ny taratasy, nikatona tanteraka anefa izay tranombarotra tratran'ireny taratasy amin'ny teny arabo ireny raha vao mahita ny taratasy ny tompom-barotra, nisy nilaza fa fandrahonana an-dry zareo hoe "anjaranareo indray izao no horobainay", tsy mahay teny Arabo aho nefa ny fikatonan'ny tranombarotry ny Karana mahalala tsara ny teny sy soratra arabo no mety hampirona ny fiheverako amin'ny mety hisian'ny fandrahonana. Tsoriko kosa fa tsy nandre ny hanisiana marika mainty ny tranon'ny miaramila sy izay mpanohana TIM aho fa raha toa misy ny manao kivazivazy ratsy amin'izay dia marihiko mainty avokoa ny tranon'ny mpanohana ny TGV eto amin'ny tanàna. Mifankafantatra safidy daholo ihany manko izahay rehetra eto amin'ny manodidina.
Fa ny any amin'ny faritra kosa, nisy baomba nandatsa-dranomaso nipoaka ihany koa tany amin'ny faritr'i Tsaramandroso ao Mahajangà ao, hanaparitahana ireo mpandroba saiky hanao ny asany tany, nifanindran-dalana tamin'ny hetsiky ny mpanohitra moa ny fotoana saiky hanaovana ny fandrobana nefa azo heverina ihany fa karazana fanararaotana amin'ilay hetsika misy any ity fandrobana nokasaina hatao ity. Tsy fantatro kosa aloha raha nahavaky trano ry zalahy na tsia! Ny tao Fianarantsoa kosa indray dia faritra maromaro tokoa no nametrahan-dry zalahy barazy rehefa tonga ny hariva! izay no izy rehefa tsy navela na nampirisihana hivondrona ny mpanohana ny ara-dalàna. Eny e! mety hisorohana ny fifanandrinan'ny andaniny sy ny ankilany angamba izany, nefa anie tena hitroatra handray ny andraikiny mihitsy ny olona raha mbola manampi-tsofina amin'ny mpanohana azy ny fitondrana nefa dia lasa hetsika miparitadritaka izany e! Avondrony ny hery raha tiana ny mbola hijoroana... Fa raha tsy hanao izany nefa tsy handray andraikitra manoloana ny fanakatsakanana ny fivezivezen'ny olona sy ny entany mialà fa mampitombo sorisory fotsiny! Ny olona koa efa miandry ny faran'ity tantara ity ka hanamarina na handiso ny filazana hoe "oviana koa no nisy tolona tonga teo amin'ny kianjan'ny 13 mey tsy tonga tany amin'ny fenitra notratrariny izany?". Ny any Antsirabe indray moa dia efa nodradradradraina fa ny alarobia 4 martsa no haka ny anjara katsaka eny ambany andrefana (toeram-pambolen-dRavalomanana) ny rehetra, eny Amboronomby ny fotoana ary samy efa nentanina hitondra gony hamenoana katsaka ny rehetra.
Na izany aza efa misy ny fanapahan-kevitra ankasitrahako tamin'izay efa natao tao ho ao. Iray amin'izany ny fanampenam-peo sy sary natao tamin'ny radio sy TV VIVA, minia mandainga tsotra izao manko ireo toby roa toa iray ireo. Iza no nanomboka ity raharaha ity? tsy fantatro loatra fa ny niharany voalohany indrindra fantatro dia ny radio fahazavana 88.6 Mhz ary ny nanampim-peo dia ny radio VIVA, tena nogafian-dry zalahy manko ny fandaharam-pivavahana mpandeha amin'ity radio ity. Nefa efa nahatsikaritra fahapatapahan'ny fandaharana tao amin'ny Mbs matetika aho (eo amin'ny maridrefin'ny mbs teo aloha manko no nandehanan'ny radio mada teo alohaloha kely teo ary mpihaino azy aho) tamin'ny fiandohan'iny herinandro efa nivalona iny na talohan'izay akory aza, farany aza dia tapaka tanteraka ny maridrefy 95.4 Mhz fa ny 100.8 Mhz sisa mandeha amin'izao fotoana izao. Heveriko fa namaly bontana ny tao amin'ny radio mada (tadidio fa trano iray mifanila birao ny misy ny radio mada sy ny radio fahazavana eny Faravohitra) nanomboka ny Zoma 27 febroary 2009 teo, vokany: sary tsy mihetsika no hita tamin'ny VIVA TV ny Sabotsy 28 febroary ary tsy nisy sary nivoaka intsony nanomboka ny 1 marsa 2009... ny eritreritro moa dia hoe angamba lany vola ry zalahy hampandehanana ilay tele... hay moa nitaraina ry zalahy avy eo!
Ny tao amin'ny radio Antsiva indray ataoko fa tamin'ny alahady folakandro no tsy heno izy nandritra ny ora maro satria tapaka avokoa ny jiro teto Antananarivo, noho izany tsy nisy nandeha ny radio sy ny tele rehetra ankoatra ny Radio don bosco sy ny radio mada irery ihany, RDB satria any Ivato ry zareo sady manana gropy fiandry fandefasam-peo sy sary rahateo, sy ny radio mada izay heverina fa tsy eny Faravohitra no tena mampandeha azy fa any ivelan'Antananarivo any. Ny fotoana hafa hoe tsy nandrenesako ny Antsiva kosa indray moa tsy fantatro loatra satria isakyny mamadika mihaino any aho reko hatrany ry zareo. Efa nilaza moa ny tao amin'ny jirama fa tsy misy ifandraisany amin'ny tolona nataon-dry zareo ny fahatapahan-jiro tsy nisy kotroka sy orana tamin'ny alahady iny fa olana tany Andekaleka tany.
jentilisa, 04 martsa 2009 00:40 maraina
Misaotra hatrany r'ise amin'ny fitantarana ny zava-misy hitan'ise a!
Izaho efa nalahelo hoe : sanatria ve ka leo, na kivy i jentilisa ka tsy hilaza vaovao intsony.
Mahereza r'ise a!
Enga anie ho hitan'ny mpitondra io fampandraisana anjara ny vahoaka io.
Ny hitako ho tsaratsara kokoa dia izao :
atsangana ny andrimasom-pokonolona manara-dalàna, izay eo ambany fitarihana mpitandro ny filaminana vitsivitsy isaky ny fokontany.
Fanampin'izany, tokony hanamboatra fonja vaovao malalaka tsara koa ny fitondrana. Tsy hoe tsy misy ny fonja ka dia avela hanao izay ataony ny mpanao ratsy. Eritreritra ka alefa.
Izaho koa dia faly amin'ny fandraisan'ny mpitandro ny filaminana ny raharaha. Ary manahy ihany anefa (tahaka anao) satria "efa miroborobo fatratra sy nahazo vahana ireo mpanakorontana".
Farany dia mankahery ny fitondrana "hamoritra mafy ireo mpanakorontana" : Enjeho ny fahadisoana hatrizay, dia ny fileferana hatrany.
Nampidirin'i Tokinao @ 23:23, 2009-03-04 [Valio]
Msotra @'ny fanehoan-kevitra sy fanentanana tsara ataonareo eto @'itony blog itony.
Nampidirin'i Ndriana @ 23:34, 2009-03-05 [Valio]
Nampidirin'i karako - Canada @ 13:06, 2009-03-06 [Valio]